सहकारी व्यवसायमा बाधा पु¥याउने कानुन संशोधन हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ - सुनाखरी न्युज
सहकारी व्यवसायमा बाधा पु¥याउने कानुन संशोधन हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
Posted on: July 3, 2021 - 7:27 pm
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण र रोजगारी सिर्जनामा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । सो कुरा उहाँले ९९ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शनिवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताउनुभएको हो ।
सहकारीको विकासमा अवरोध गर्ने कानुन संशोधन गर्ने विषयमा आफ्नो प्राथमिकता रहने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘सहकारी व्यवसायलाई बाधा पु¥याउने ४७ वटा ऐनहरु सहकारीमैत्री बनाउनमा आप्mनो तहबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘राज्यले सहकारीलाई काम गर्ने वातावरण दिने हो, त्यसमा हामी लाग्नेछौं ।’ राज्यलाई सहकारीको सहयोग आवश्यक रहेको र निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा अभैm सहकारी विस्तार आवश्यक रहेको बताउँदै सहकारी धेरै भएको ठाउँमा एकीकरण र नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्था विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारीको योगदानको प्रशंसा गर्दै सचिव पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी अभियान व्यवसायिक बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिनभयो । सहकारीले राम्रा काम गर्दागर्दै पनि केही कमजोरीहरु पनि रहेको बताउँदै सचिव पाण्डेले सहकारीहरुले गरेको कमजोरीको रिर्पोट मन्त्रालयसम्म आउने गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले सहकारीको गरेको असल अभ्यास अन्य सहकारीहरुले पनि अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो समारोहमा महासंघका निर्वमान अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री केशव प्रसाद बडाल, आइसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य तथा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल,उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेल लगायतका सहकारी अभियानका अग्रणी व्यक्तित्वहरुले आ–आप्mनो मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग वाण्ज्यि तथा आपुर्ति मन्त्रालयकी सह सािवच चन्द्र कला पौडेलले पुननिर्माणमा संयुक्त पहल भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले कार्यत्रकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । जुलाईको पहिलो शनिवार विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको छ । कोरोना महामारीबाट पुर्नउत्थान गर्नका लागि सहकारीको भूमिका र योगदानको विषयलाई महत्व दिदै यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको हो ।
बाँस्कोटालाई राष्ट्रिय सहकारी पुरस्कार
सहकारी संघ÷संस्था पुरस्कृत
नेपालको सहकारी अभियानको अग्रणी व्यक्तित्व दिपक प्रकाश बाँस्कोटालाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर ‘राष्ट्रिय सहकारी पुरस्कार’ बाट सम्मान गरेको छ । महासंघले प्रत्येक बर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा पुरस्कारको घोषणा गर्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा पुरस्कार वितरण गर्ने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा शनिवार महासंघले बास्कोटालाई सम्मान गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले नगद पचास हजार सहित उहाँलाई सो पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्नु भएको हो । सहकारी अभियानलाई जग बसाल्न र सहकारी ऐन–२०४८ र नियमावली निर्माणमा उहाँको भूमिका रहेको थियो । बाँस्कोटा पूर्व गृह राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार २०७७ बाट जिल्ला सहकारी संघ लि. चितवन पुरस्कृत भएको छ । यो पुरस्कार सहकारी संघहरुमध्येबाट एउटा दिने गरिन्छ । उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७७ बाट ७ वटै प्रदेशबाट एक÷एक वटा उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
त्यसरी पुरस्कृत हुने सहकारी संस्थाहरुमा प्रदेश नं.१ बाट कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था लि. सुनसरी पुरस्कृत भयो । प्रदेश नं.२बाट त्रियुगा सहकारी संस्था लि फत्तेपुर, सप्तरी, बागमती प्रदेशबाट महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. धादिङ्ग पुरस्कृत भयो । गण्डकी प्रदेशबाट दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.तनहुँ, लुम्बिनी प्रदेशबाट हाम्रो मध्यवर्ती राधाकृष्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र कर्णाली प्रदेशबाट दलित महिला कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मुगु रहेका छन् । यसैगरी यस वर्षको ‘उत्कृष्ट सहकारी कर्मचारी पुरस्कार २०७७’ बाट जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. मकवानपुरकी व्यवस्थापक सुमित्रा कुमारी वाइबा पुरस्कृत हुनु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘उत्कृष्ट सहकारी कर्मचारी’ पुरस्कारबाट वाइबा सम्मानित हुनुभएको हो । उहाँ मकवानपुर जिल्ला बचत संघको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।
एकीकरण गर्ने संघलाई महासंघको प्रोत्साहन
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संघ÷संस्थाको एकिकरण अभियानलाई जोड दिएको छ । यसैसन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर महासंघले जिल्ला कृषि सहकारी संघ लि. ललितपुरलाई प्रोत्साहनस्वरु २५ हजार रुपैयाा प्रदान गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले संघलाई चेक प्रदान गर्नुभएको थियो । कृषि सहकारी संघ र जिल्ला च्याउ उत्पादन सहकारीसँघ बिच एकीकरण भएको थियो । गत २०७८ असार ६ गते एकीकरण स्वीकृत भई एकिकृत संघको प्रमाणपत्र लिइएको थियो । सो संघका अध्यक्ष महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल हुनुहुन्छ ।